मार्क ट्वेनको चर्चित उपन्यास “राजकुमार र भिखारी” भाग ५ | साहित्यपोस्ट
प्रकाशित ३१ जेष्ठ २०७८ १८:०१
राजकुमार र भिखारी ३२
मध्यरातमा मच्चिएको हल्लीखल्लीले जोन क्यान्टीका परिवारको निद्रा भङ्ग भयो ।
यत्तिकैमा कसैले ढोका ढक्ढक्यायो ।
“यति राति आउने को हो हँ ?” जोन क्यान्टीले सोधे ।
“म तपाईंको पुरोहित के ! तपाईंले आफ्नो पुरोहितलाई समेत चिन्नुभएन ?”
जोन क्यान्टीले भने, “अहँ मैले चिनिन ।”
राजकुमार र भिखारी ३३
ढोका ढकढक्याउने मानिसले सबैलाई सतर्क गराउँदै भन, “म फादर एन्ड्रयु हुँ ।” “राजकुमार एड्वार्ड पागल भएको पीरले राजा हेनरी अष्टमको निधन भएको छ । राजकुमार पागल जस्तै भएकाछन्‌ । उनले जे जस्तो आदेश पनि दिन सक्छन्‌ । ठूलो विपत्ति आउला जस्तो छ । अब घरमा बस्नुहुँदैन, भागौं छिटो ।”
बिहानी सूर्यका किरणसँगै अधिकांश मानिसहरू राजाको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न सहरको मध्य भाग हतारहतार जम्मा हुन थाले ।
राजकुमार एड्वार्डलाई बुबाको मृत्युको घटना सपना जस्तै भइरहेको थियो । उनलाई बुबाको मृत्युको मुख्य कारण टम क्यान्टी नै हो भन्ने लाग्यो ।
दरबार फर्किनु बाहेक राजकुमारसँग अर्को विकल्प थिएन । उनले भिखारी टम धोखेवाज हो र टमकै कारण बुबाको मृत्यु भएको कुरा सबैको सामु भन्ने विचार गरे । त्यतिमात्र होइन, उनी टमलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने निर्णयमा पनि पुगे ।
उता दरबारमा राजाको मृत्युपछि टमको शोभायात्रा गर्ने निर्णय भयो । उसको शोभायात्राको तयारी हुन थाल्यो । शाही डुङ्गामा रेशमी गद्दा राखिएको थियो । वरिपरिको वातावरण अत्यन्त मनमोहक र रमणीय थियो ।
लन्डनको बीच भागमा अवस्थित प्रेक्षालयमा डुङ्गा रोकियो । टम शाही शैलीमा डुङ्गाबाट ओर्लियो र शोभायात्रामा सरिक भयो । सबैको केन्द्रबिन्दु ऊ नै थियो ।
लर्ड मेयर र नगर प्रमुखले शोभायात्रामा संलग्न सबैलाई ग्रेटहलमा लिएर गए | ग्रेटहलमा टमको आगमनपछि सबैले फूलमालाले जयजयकार गर्दै अभिवादन गरे ।
अभिवादनपछि टमलगायत सबैले उठेर सुनको कपमा एक साथ चाीयर्स भन्दै रक्सी पिए । रक्सी पिउने काम सिद्धिएपछि धुमधामसँग नाचगानको कार्यक्रम भयो ।
राजकुमार र भिखारी ३४.
टम यी सबै कुरामा अनभिज्ञ थियो । जसले जे भन्छ ऊ त्यही गर्थ्यो ।
अन्त्यमा बिगुल बजाउँदै राजा हेनरी अष्टमको निधन भएको र टम नयाँ राजा भएको घोषणा गरियो । ग्रेटहलमा उपस्थित सबैले एकसाथ राजा एड्वार्ड छैठौं जिन्दावाद ! भनी नारा लगाए ।
लर्ड हर्टफोर्डले आश्वस्त पार्दै टमलाई भने, “आजदेखि इङ्ल्याण्डका राजा हजूर नै हो । हजूरको बोली नै यस देशको लागि
कानून हुनेछ ।” एकपल्ट फेरि हल गुञ्जियो, “इङ्ल्याण्डका राजा एड्वार्ड चिरायू रहून्‌ !”
यी सबै घटना टमले नचाहँदा नचाहँदै भएका थिए | उसले चाहेर पनि विरोध गर्न सकिरहेको थिएन । एककिसिमले जे जति घटनाहरू क्रमिक रूपमा विकास भएर गइरहेका थिए । ती सबै स्वीकार्नुबाहेक ऊसँग कुनै अर्को विकल्प पनि थिएन ।
असली राजकुमार एड्वार्डले यी सबै क्रियाकलाप भीडको एक छेउमा ट्वाल्ल परी हेरिरहेका थिए | “म राजकुमार एड्वार्ड हुँ, त्यो एउटा झुत्रेझाम्रे भिखारी टम हो ।” यो कुरा उनलाई मात्र थाहा थियो । उनी गएर भन्न पनि सक्दैनथे र भने पनि कसैले विश्वास गर्दैनथ्यो ।
२८ असार २०७८ १९:४६
मार्क ट्वेन २१ असार २०७८ १९:०१
मार्क ट्वेन र बद्रीप्रसाद घिमिरे १४ असार २०७८ १७:०१
७ असार २०७८ १८:०१
राजकुमार छक्क पर्दै “राजा एड्वार्ड छैठौं चिरायू रहून्” भन्ने सुनिरहेका थिए । ठिक त्यसबेला उसलाई पहिले पिट्न खोज्दा उसलाई बचाउने व्यक्तिसँग अचानक जम्काभेट भयो ।
दुवैजना पुराना परिचित साथी जस्तै व्यवहार गर्नथाले । हाँस्दै, गफ गर्दै उनीहरू नजिकै रहेको भट्टीमा पुगे ।
संजोगले राजकुमारलाई पिट्न खोज्ने व्यक्ति पहिले नै आएर त्यही भट्टीमा रक्सी खाइरहेको
राजकुमार र भिखारी ३६
थियो । उसले भन्यो , “ल, तिमीहरू पनि यहाँ आइपुग्यौ हैन ? ठिक छ, अबचाहिँ तिमीहरू उम्किन पाउने छैनौ ।”
राजकुमारको साथीले बाटो छेक्दै उसलाई भने, “किन यति साह्रो हतार हो साथी ? यो केटो को जस्तो लाग्छ तिमीलाई ?”
राजकुमार र भिखारी ३७
उसले भन्यो, “तिमीलाई के चासो ? ऊ मेरो छोरो टम क्यान्टी हो । म उसको बाबु जोन क्यान्टी हुँ । ऊ घरबाट निस्केको दुइ तीन दिन भइसक्यो | के मलाई केही थाहा छैन भन्ने ठानेका छौँ ? मेरो व्यक्तिगत कुरामा धेरै चासो नलेऊ ।”
बल्ल राजकुमार एड्वार्डले उसले आफूमाथि आक्रमण, गर्नुको कारणा बुझे । राजकुमारले विनम्र हुँदै भने, “म राजकुमार एड्वार्ड हुँ । बिन्ती गर्छु, मलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्‌ ।”
जोन क्यान्टीले अचम्म मान्दै भने, “तँ राजकुमारको अभिनय गर्दागर्दै पागल भइसकेछस्‌ । आफ्नो बाबुलाई पनि बिर्सिसकेछस्‌ ।”
“हिँड्‌ अब घर । घरमा सबैले तँलाई पर्खिरहेका छन्‌ ।” यति भन्दै ती मानिसले राजकुमारलाई घिसार्न पो थाले ।
“राजकुमार नभइकन पनि कहाँ म राजकुमार एड्वार्ड हुँ भन्थे होलान्‌ र ?” फेरि केटोको व्यवहार ठ्याकै राजकुमारको जस्तै छ, बोलीवचन, हेराई, हिँडाई ठ्यामै राजकुमारकै जस्तो छ । नयाँ साथीलाई केटोको भनाइ साँचो जस्तो लाग्यो ।
कसैको अन्याय हेर्न नसक्ने उक्त व्यक्तिले राजकुमारको पक्ष लिएर भन्यो, “राजकुमारलाई छोइस्‌ मात्र भने पनि म तँलाई दुई टुक्रा पारिदिन्छु ।” उसले हत्तपत्त कम्मरमा रहेको तरबारतिर हात पुर्यायो ।
उसको यस्तो डरलाग्दो व्यवहार देखेर जोन क्यान्टी अलि हच्किए । टमको राजकुमार हुने अभिनयको भूत उत्रेपछि आफै घर फर्कन्छ भन्ने उनलाई लाग्यो । झगडा गर्नु ठिक नहुने ठानी उनी पहिला झैँ भीडमा मिसिए ।
केटोले भनेझैँ साँच्चिकै यो असली राजकुमार हो भने त मैले ठूलो फाइदा लिन सक्छु भन्ने ठानी उसलाई आफ्नो कोठातिर लगे । कोठामा खूब मान-सम्मान गरेर भोजन गराए ।
राजकुमार र भिखारी ३८